Siouxland Public Media News: Oromo on Stitcher
Of eegannoo Blizzard kan siouxland hanga seeati 6 tura kan jedhame ture, yeroon inii dhabatuu taee j
Oromo News 01/15/2021 Of eegannoo Blizzard kan siouxland hanga seeati 6 tura kan jedhame ture, yeroon inii dhabatuu taee jira haali qilleensa kunis hang halkan qixxeeti kan itti fufu ta’a. Local authorities mana akka taa’an gorse yoo gad bahuun dirqama qofa tae male. National weather service kan Sioux falls akka jedheti yoo bakka tokko kan deemtani mucucaa muraasaf akka dura qophaahu qabdanii fi osoo ala gad hin bahin haala qilleensa akka laalu qabdan jedhani himan. Hawaasni mana barumsa Sioux City guyyaa har’aa gabaasa nama corona virus qabame wayta gabaasan barsiisota irraa namni tokko qofa kan qabame yoo tau, barattoota irraa ammo namuu akka hin qabamin himan. Ammas Aanan akka jedhetti gabaasa waliigala hime jira fi nama adda baafame taau kan jiru barattoota 19 yoo ta’an barsiisonni ammo 17 dha. Hojattooni kaluu kanatti kan bahan tae. hojattooni 9 adda baafamani taauti kan jiran yoo tau, barattooni ammo nama 245 dha. Aanan mana barumsa jalqaba bara 2021 irrati barums online dhaan
Oromo News 01/13/2021 Woodbury County keessati namni corona virus qabame 2 seati 24 keessati duanii jiru, waliigalatti namni due 175 gaheera. Namni harownii qabame 46 jira. Deparmantiin mana fayyaa Iowa seaati 24 keessati namni 10 sababa covid-19 du’uu gabaasan, waliigalatti namni due 4,200(4,232) ol tu due jira. akkasumas namni haarawa qabame 1,900 yoo tau, waliigalati namni qabame ammo 300,000 ol dha. Counties dhan Iowa 50 ol qorannoo bultii 14 godhan keessati namni qabame parsantii 15% akka ta’an himame. Woodbury County ammo 15.4% dha. Ogeesoni mana fayyaa Siouxland mask godhachuu, addeen fageenya eegachu, harka dhiqachuu, yoo dhukube mana taa’u, fi walitti dhufeenyi hin barbaachisne irraa uf eegu akka qaban ibse. Iowa warri dhufan haarawa kan shuumaman hojattooni U.S House President Donald Trump motumaa irraa akka bu’uu hin hayyamnu jedhan. Isaan kunis Randy Feenstra kan Hull, Ashley Hinson kan Marion fi Mariannette Miller-Meeks kan Ottumwa turan. Kun Kanaan osoo jiru, Lone
Oromo News 01/11/2021 State lawmakers guyyaa har’aa gara Capital Iowa deebiani jiran. Barumsi, taxation, eegumsi filannoo gubbaa irraa jiru kan bara 2021 Iowa legislature dhaafi namni 200 ol kan maaski hin godhanne argamanii turan. Namootni dhibaatama keessa namni muraasa haguugi fuula osoo hin godhatin Capital Iowa har’a guutani jiru. Haguugi fuula kan morman yoo kan mormaniidha fi ogeeyyin fayyaa dhukubi akka hin baayane kan qarqaaru akka tae himanii turan. Iowa warri ammatii puplic health akka himanitti haguugi fula alaatti godhachun akka qabamuufi yoo daqiiqa 15 ol walbira turaniile. Garuu seera baastonni repaplikaana walgahii har’a Capital keessati walitti qabamanitti haguugi fuula godhachuu didan. Warii seeraa egaan 150 ta’an haguugi fuula male Statehouse walitti qabaman. Iowa keessatti namni haarawa Covid-19 qabaman nama 511 yoo ta’an namni 11 ammoo duanii jiran. March irraa akka dhukubni jalqabame booda namni corona virus qabaman 300,000 yoo ta’an nmani duemmoo 4100 dha.
Hawaasni mana barumsaa Iowa gabaasa corona virus torbaan kana irrati hojattoota keessa namni tokko k
Hawaasni mana barumsaa Iowa gabaasa corona virus torbaan kana irrati hojattoota keessa namni tokko kan qabamee fi barattooni homa akka hin qabamin himan. Namni 200 ammati adda baafamani taa’urra kan bahaniidha. Kunis December dhuma irrati 500 gad kan bu’eedha. Barumsaf barattoni wiyxata kan dhaqan yoo tau barumsi online torbaan lamaaf kan hafeedha. Kunis barumsaaf guyya lama qofa barumsaaf torbaan keessatti kan deemaniidha. Haala barumsaa irrati boordi wiyxta dhufuu walgahanii akka irrati mariatan himan. Governor Iowa Kim Reynolds sport fi bakka bashaannanaa irrati lakkoofsa muraasni kan kaahame ture har’a kan sute yoo tau, kunis kan kayameeguyyaa gaafa namni 59 sababa Corona virus du’aniidha. Namni tokkoo Woodbury County keessa dabalatee. Akka dhukubichi kun jalqabee namni due 172 dha. Governor Nebraska Pete Rickets akka jedhetti yeroo jalqabaati namni yeroo jalqaabaf October keessati namni hospitaala jiru 500 dha. Oduu conference ganamaa kana irrati Rickets akka jedhetti ummani
Oromo News 01/07/2021 Governor Iowa Kim Reynolds, akka dhukubni covid-19 hin baayanneef ogeeyyi fayyaa waliin waliigaltee haara dhukuba irrati malatteesuf himte. Seerri kunis mana keessati ta’ee wayta nama wajjiin walgahaan daqiiqa 15 caala yoo kan turani haguugi fuula godhachuu akka qaban himan. Sponsara mana barumsa sadarkaa lamaffaadhaf bakka wal gahii fi isportiiti hangi nama kan murtaahe ture, amma akka guyyaa jimaata ka’uu malu himan. Seeri Manneen fayyaa biraa amoo sera qaraa hanga February 6 th kan fufu ta’a. Barsiistu mana barumsa Northwest sababa Covid-19 du’uun eshii himame. Cherie Dandurand barsiisa middle school fi coach kubbaa harkaa Woodbury County keessati dalagaa turte. Districkt bara 1991 kan seentedha. Akkaata Website himutii barsiisan track kunii, barreessaa North High School kan Sioux City October keessa sababa Covid-19 dueera . Kana dura district mana barumsa Sioux City du’a irratti yaada homa hin kennine ture jedhani yaada kan kennan wayta sanitti mana barumsa
Oromo News 01/06/2021 Lakkoofsi jiraattota Iowa sababa Covid-19 du’anii 4,000 gaheera, guyyaa har’aa qofa namni 61 du’uun gabaasame. Woodbury County keessati, seaati 24 keessati namni 94 haarawa qabamuu gabaafame waliigalatti namni qabame 12,500 yoo tau waliigalatti namni duemmoo 171 dha. Namni qabame amma walii galatti parsanttiidhan 16.8% gaheera. Qorannoon bultii 14 keessati godhame torbaan lama darban irraa 13.5% dabalee jira. Dhukubnii haarowni, state shan keessati virus corona virus haarawa argamee jira. Ogeessi fayyaa akka jedhetti haga amma laalametti Nebraska keessati argamuun nimala jedhu. Ogeessi fayyaa akka jedhetti dhiiban haarawni hospitaala Nebraska keessati akka fiduu malu waan jedhaniif rakkoon laalamu mala jedhan. Virus haarawni England akka haarawati lockdown deebise jira, fi virusichi California, Florida, New York, Georgia fi olaa Colorado sene jira. Abaa murtii federaala tokko president Trump’s kaampaani fooni irrati “critical infrastructure” Tyson sababadhukubicha
Oromo News 01/05/2021 Ayyaana bara haarawa irrati mucaa umrii 19 qawwee dhokaasuudhan dubartii tokko kan ajjeesefi nama sadihii biraa kan maddeese ture himatamee jira. Poolisin Sioux City akka jedhetti Christopher Morales qawwee gurguddaa nama sodaachisuufi akkanuman nama sodaachisuudhan himatame jira. Poolisin akka jedhetti Morales namni tokko ollaa Morningside irraa akka inni mana seenu dirqisiise jira, wayta qophiin jalqabamu. Isaa fi kan biraa qawwee baaye mana keessati dhokaasani jiran. Mia Kritis umrii 18 kan tatee kan due yoo tau ijoolen biraa 3 madaahani jiru. Poolisin akka jedhetti morales addabbii barbaachisa kan argatu yoo tau. Kritis baratuu senior kan North High School ture. Siouxland qophiidha qilleensa biraa kaa wintaraa akka dhuffuu hime, hojattooni haala qilleensa biyyaa akka jedhaniti barri 2020 magaala Sioux City dhaaf qilleensa gogaa ture jedhani. Waggaakan suttes precipitation inche 20 qofa ture. Kan ta’uu qabus inche 28 ture. Kanaafu, waggaati inche 7.66 gadi 2020
Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasanitti guyyaa wiyxataa Woodbury County keessati namni 3 dab
Oromo News 01/04/2021 Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasanitti guyyaa wiyxataa Woodbury County keessati namni 3 dabalataan sababa Covid-19 du’uu himan, akka dhukubni jalqabe nama 171 du’ee. Torbaan tokko keessati, Iowa nama due 247 edaate jirti fi namni haarawa qabame ammo 10,000 ta’uu gabaasan. Woodbury County keessati, guyyaa haar’a namni haarawa qabame 17 yoo ta’u, qoranno bulti 14 keessati namni qabame parsantii dhan 15.5% gaheera. Torbaan lamaan darbe irraa parsanti lama olgudattee jira. Manni fayyaa Siouxland akka himetti gabaasa December 27 th torbaan dhumaa irrati ergabaasanitti namni qabame akka olgudattee jiru himan. Gabaasni akka jedhetu Kanaan dura namni xiqqaachu kan male sababa namni haguugi fuula godhachuufi fageenya ufii egachun ta’uu nimala jedhame. Haata’u male, guyyaa ayyaana namni seera kana kan hin hordafin ta’uu nimala. (South Dakota tti torbaan tokko keessati namni 2,000 ol kan qabame yoo ta’u, namni waliigalatti duemmoo 67 dha. Nebraska keessati, torbaan
Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 namni 67 guyyaa har’aa kan du’e yoo ta’u seati 24 darb
Oromo News 12/29/2020 Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 namni 67 guyyaa har’aa kan du’e yoo ta’u seati 24 darban kana keessati namni haaraawa qabame ammo 1,500 dha. Manneen nursing kan Iowa keessati talaalin corona virus kennamu jalqabe jira, kunis warra isaani akka dhufanii laalanafis karaa kan banamu ta’a kan jedhamu abdi qabu, talalin kun wal gahuudhaf turban ol akka fudhatus himan. Aanan mana barumsa Nebraska hojattooni hagamtu akka akka talaali corona virus fudhachuu barbaadan laalu jira, kanaafu ogeessi fayyaa talaali buusu ni danda’a. hoajattooni mana barumsa warraa ogeeyyi fayyaati aanan talaali corona virus kan fudhatan akka tae himame jira. Barsiisoni talaali January fi February keesa kan fudhan yootau hojattooni biras akkasuma. Hojattooni fayyaa Nebraska sababa ayyaana Christmas fi bara haarawatif namni walitti qabamuun case haarawa akka baayatu ta’a jedhame yaadamu jira. Torbaan laman darbe kanniin keessa, lakkoofsi nama qabamuu harka qixxeedhan gad xiqqaata
Haalaqilleensaa Tajaajilla Biyyoolessa waligala akka jedhanitti “impactful ykn Dhiibbaa” qilleensi g
Oromo News 12/28/20 Haalaqilleensaa Tajaajilla Biyyoolessa waligala akka jedhanitti “impactful ykn Dhiibbaa” qilleensi guyyaa kibxata fi galgala isaas akka gara biyyati deemu jirau himan. Snow jiddu galeessa fi guddaan inche 3 hanga 7 Siouxland akka argachuu maltu himan. Sababa haala qilleensa amma dhufaajiru kanaaf, communities siouxland dhaaf seeri emergency snow dhaaf akka bahuu dandau himan, kan akka Sioux City, South Sioux, Dakota City, North Sioux, Hinton fi Norfolk, Nebraska kan dabalatuudha. Gaazexan Sioux City akka gabaaseti, guyyaa gidirsanbata lakkoofsa namni covid-19 qabame jiaan laman darbe kana keessa irra namni 17 qofa qabamuudhan lakkofsi baaye xiqqaate tae galmaahe jira. Guyyaa har’a, namni 19 kan dabalame yootau akka dhukubni jalqabe waliigalatti namni 12,000 qabamanii jiru namni due ammo 163 dha. Dhukubsattooni hospitaala Sioux City lama keessa jiran nama 55 akka tae dubbatame. Kunis December 1 st irraa qabame harka qixxee kan ta’eedha. Qorannoo bultii 14 Woodbury
Blizzard akeekachiisa kennite jiraattota Siouxland dhaaf guyyaa harbaa sababa snow, jajjabaa, bubbe
Oromo News 12/23/2020 Blizzard akeekachiisa kennite jiraattota Siouxland dhaaf guyyaa harbaa sababa snow, jajjabaa, bubbee fi qorraa hanga 9pm irrati. National Weather service akka jedhanitti magaalan Sioux City snow inche sadii akka bu’u maluu himan. Bulchaan Sioux City Mayor Bob Scott seera emergency snow hime jira. Seerri emergency kunis karaa irrati makiina seera malee dhaabu fi abbaan ufii laalu male kan dhoongudha, eegumsa baradoofi qalama adii fi buleedhan kan kaahameedha. Makiinan harbaa December 23 irraa jalqabe karaa irra dhaabachu ni danda. Guyyaa kamsaa December 24 irraa jalqabe seati 7.00 a.m irraa kae akka kauu qabu himan. Yoo malattoon parkin hin jiruu jiraate,makiina achi dhaabu hayyama hin qabanii akkasumas achii kaasu qabu kara bakka biraati. Jiraattoni Iowa namni 15 dabalataan sababa Covid-19 duanii jiru. Seaati 24 keessati namni haarawa qabame ammo 2,000 ol dha. Ogeessi South Dakota ummani yeroo ayyaan kanatti akka talaali corona virus fudhatan yaadachiise, akka
Majiraan dhimasho cusub sababo laxiriira dhibaatooyinka COVID-19 oo ay soo werisay Waaxda Caafimaadk
Majiraan dhimasho cusub sababo laxiriira dhibaatooyinka COVID-19 oo ay soo werisay Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa 24-kii saac ee lasoo dhaafay oo dhamaatay subaxnimadii 10-kii subaxnimo. Lix-boqol oo dheeraad ah oo reer Iowans ah ayaa laga helay cudurka loo yaqaan 'coronavirus'. Ku dhowaad 3,600 ayaa ku dhintey muddadii faafida, oo ay ku jiraan laba kale oo ka tirsan Gobolka Woodbury, oo loogu talagalay 159 dhimasho gudaha ah iyo 25 xaaladood oo cusub. In kasta oo aan dhimasho lagu darin Iowa maanta, haddana saraakiisha caafimaadka Axaddii waxay diiwaan geliyeen 138 kale oo dhimasho ah. Waxay sheegeen inuu jiro dib udhac u dhexeeya qofka markuu dhinto iyo marka la soo sheego. Toddobaadkii la soo dhaafey, Iowa waxay soo werineysay celcelis ahaan ku dhowaad 46 dhimasho maalin kasta. Tirooyinkii ugu dambeeyay ayaa sii waday inay ka soo fiicnaadaan Nebraska Axadii iyada oo tirada isbitaalada la dhigey ay ka hooseeyaan 600. Tiradaasi si isdaba joog ah ayey hoos ugu dhacday tan iyo
Sa’ati 24 kan hanga 10 a.m tti deparmantiin mana fayyaa Iowa gabaaseti namni sababa Covid-19 haarawa
Oromo News12/21/20 Sa’ati 24 kan hanga 10 a.m tti deparmantiin mana fayyaa Iowa gabaaseti namni sababa Covid-19 haarawa due akka hin jirre hima. Jirattoni Iowa 600 ammoo haarawa coronavirus qabamani jiran. Waliigalatti akka dhukubni kun jalqabe namni 3,600 du’ani jiru. Woodbury County keessati nama lama har’a due haarawa dabalate, waliigalatti namni Woodbury county keessati due 159 yoo tau kan har’a haarawa qabame ammo 25 dha. Guyyaa namni haarawa Iowa keessati due lakkoofsa dabalame hin jiru, guyyaa sanabata ogeeyyin fayyaa nama due 138 akka ture himanii jiru. Akka jarri jetteti namni tokko wayta due fi wayta gabaafame addaan turiiti akka qabu himan. Torbaan darban keessa, Iowa akka gabaasseti guyyaa tokkoti averijiidhan namni 46 akka du’u himan. Lakkoofsidarbe sirraaha akkuma dhufu jirutti Nebraska keessati guyyaa Sunday namni hospitaala jiru 600 gad akka tae gabaasan. Lakkoosi kunis akkuma gad xiqqaata dhufu jirutti jira akka ji’oota darbe namni 1000 lakkaawame booda. Garuu,
Erga state Iowa sababa Covid-19 nama due 238 gabaasan booda seaati 24 keessati nama due haarawa hin
Oromo News 12/18/2020 Erga state Iowa sababa Covid-19 nama due 238 gabaasan booda seaati 24 keessati nama due haarawa hin gabaasne. Namni haarawa qabame 1,900 dha state keessati namni qabamu xiqqaachu ittuma fufu jira. Woodbury County keessati namni harawni qabame 62 dha, Dakota County keesaa ammo nama 9. State akka gabaaseti namni hospitaala jiru 701 yoo tau namni 96 covid-19 kan qabameedha seaati 24 keessati itti dabalame. Lakkoofsi lamaanu torbaan laman darbe irrraa kan xiqqaatedha. Hospitaala Sioux City lamaan keessati dhukubsattooni 60 jira. Doctorri emergency gudichi deparmantii Unity point health dhukubicha kan akka hin babalanneef hir’isuuf seera dhukubicha akka hordafuu qabamu hime. Aanan mana barumsa Sioux City gabaasa Covid-19 kan torbaani gabaasani jiru fi yeroo jalqabaaf barattoota fi hojattoota kan adda baafani taa’anhimee jira. Torbaan darbe kana, gabaasni akka mulisutti barattoota 4 fi hoajattoota 6 virus dhaan qabame jira. North Middle class lamaa ol yeroodhaf barumsa
Oromo News 12/17/2020 Talaalin corona virus dhaaf kenamu motuman federaala waada kan seene ture maali akka keessa xiqqaa argatu hin beekamne. Garuu state seera dhukubicha xiqqeesuf karoora qabatee wayta deemuti namni 100 ol haarowni kan dueedha. Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka guyaa harbaa akka himetti parrsantii 30% kan xiqqaatedha. Gabaasni kan gadi dhiifamu kara state biraati akka jijjiiruf yaalamu jirus beekame jira. Agency botaa maalif akka xiqqaatu hin himne. Iowa akka gabaaseti guyyaa kamsaa namni waliigalan haarawa due 197 akka tae gabaasan, waliigalatti namni due 3,451 gaheera. Waliigalatti dhukubichan kan qabame ammo 262,000 yoo tau nama 70 haarawa Woodbury County keessa dabalate. Waliigalatti Woodbury county keessati namni due 151 dha. Namni hospitaala kan jiru ammo torbaan lamaan darbe baaye kan guddate as namni amma jiru 59 dha. County wan Iowa 99 keessa afurtama keessati nmani corona virus qabame parsantii 15% ol dha. North West Iowa keessati Ida County lakkoofsa namni
Oromo News 12/16/2020 Gov. Kim Reynolds namni Covid-19 qabamuu fi hospitaala galu xiqqaata waan jiruuf seera tokko tokko akka hir’isuu heddu himte. Wanni fae taus namni qabame jia darban keess irraa kan guddatee dha. Reynaldos akka jetteti guyyaa bor irraa jalqabee manneen nyaata seaati seera isaan qaraati deebia akkasumas namni walitti qabamullee lakkoofsan kan murtaahu miti. Waliigalatti , mana barumsaa high schoola fi namni tabaaf laaluf walitti qabamu lakkofsi kan dabaluu yoo tau warra illee walittee dabalee. Reynolds akka jetteti lakkoofsi ammas yoo kan dabaluu seera dabalataa isiinis akka dabaltu himte. Seerri haarawa ammas haguugi fuula kan uf keessa qabuudha. Hanga January 8 kan itti fuffuu ta’a. Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 seaati 24 keessati namni haarawa 14 kan duan niidha. Namni haarawa qabame ammo 2,000 dha. Nama 51 haarawa Wood bury County keessati qabame dabalatee. Namni haarawa Covid-19 Dakota county keessati qabamu harka 4% gad xiqqaate jira. Guyyaa
Oromo News 12/15/2020 Gaafiwan corona irrati kau deebi kennuuf jecha, manni barumsa Sioux City January 4th irraa jalqabe barumsa gara online irrati deebisuf karoora baafatani jiru. Boarding school engadda galgala erga marii godhan booda barumsi online irrati deebiu hayyaman torbaan lamaan barumsa akka jalqabiin, wayta boqonnan ayyaana sute booda. Kuni jechuunis torbaan lamaan jalqaba fi torbaan semester dhuma online irrati kan deebiu ta’a. barattooni qixxeen addaan qoodamuun wiyxataafi kamsaa kan deemaniidha, akkasumas qixxeen biraa ammo kibxataa fi jimaata kan deemaniidha. Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 namni 67 haarawa du’uu gabaasan akkasumas seaati 24 keessati namni haarawa 1,300 kan qabameedha. Manni fayyaa Siouxland Woodbury County kessati namni haarawa qabame 41 yoo tau waliigalatti namni qabame 11,500 dha. Akka dhukubni jalqabe booda waliigalatti namni due 145 dha. Dakota County keessati namni haarawa qabame 7 yoo tau waliigalatti ammo kan due 52 dha. Namni
Oromo New 12/14/20 Talaalin Covid-19 kan jalqabaa State Siouxland sadii keessa seene jira. Manni fayyaa Siouxland akka jedheti Woodbury County guyyaa muraasa keessati talaali Pfizer(f-eye-zer) 2,000 ta’u hojattoota fayyaadhaf kan kenamu ta’a. Qorichi kan biraa daraja isati kan dhufufi pharmacy waliigala irrati qarqaarsi waliigala long-term care facilities kan rabsamudha. Wayta talaalin haala moderna (muh-dern-uh) kan kenname hojattoota EMS Woodbury County 400 kan kennamuudha. Dakota County talaali kan fudhachuuf hin karoorfamne. Garuu, hojattoota fayyaa fi warra long-term facilities hojattoota isaa ilaalcha guddaa kan argataniidha. Talaalin April keessa ummata bal’aaf kan kennamu ta’a. Ogeessi fayyaa naanawa akka jedheti hanni talaali irrati godhamu seeran kan eegamuudha. Bilbila garee wannii dabalatee. Akka ogeessi jedhetti wayta talaalin siif kenamaa jedhanii credit card kee gafatuu, kanafuu kunii waraa hannaf godhuu. Talaalin kun awaala namaa midhamaa gudaa irra jiruf kenamaa, garuu